Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa shaaciyay liiska 22 ka ciyaartoy ee uu ku shaqayn doono kulanka adag ee Real Betis waxaana kulankan seegay Eden Hazard oo xaalad kale oo murugo leh galaya.
Liiska uu Zidane shaaciyay waxaa gabi ahaanba laga dhex waayay Eden Hazard kaas oo xili ciyaareedkiisii labaad ee Real Madrid xaalad kale oo xun ku bilaabanaya.
Real Madrid ayaa kulankeeda labaad ee La Liga waxay barri marti u noqon doontaa kooxda Real Betis oo xili ciyaareedyadii ugu danbeeyay dhibaato wayn ku abuuraysay kooxaha waa wayn ee horyaalkan.
Laakiin Hazard oo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Real Madrid hal gool oo kaliya ka soo dhaliyay La liga isla markaana waqti dheer ku maqnaa dhaawacyo kala duwan ayaa xaaladiisa taam ahaansho ay ka sii xumaatay sidii markii hore laga filayay.
Kooxda Zidane ee Real Madrid ayaa kulankii furitaanka ee La Liga waxay barbaro gool la’aan ah la soo gashay kooxda Real Sociedad laakiin waxa uu Zidane wajihi doonaa xaalad ka sii adag kulanka Real Betis.
Xidiga amaahda laga soo celiyay ee Martin Odegaard ayaa liiskan ku jira wuxuuna heli karaa fursad uu garabka weerarka kaga ciyaari karo kulanka Real Betis maadaama oo uu awood buuxda u leeyahay in uu boosas badan ka ciyaari karo.
Luka Jovic oo isna xaalad adag ku soo qaaday Real Madrid ayaa liiskan ku jira si la mid ah Vinicius Jr, Rodrygo laakiin waxay masuuliyada ugu wayni saaran tahay Karim Benzema oo weerarka Madrid markale hogaaminaya.
Liiska 22 ka ciyaartoy ee uu Zidane u soo xushay Kulanka Real Betis oo dhan